I-OpenSUSE 12.2 Milestone 2 iyatholakala | Kusuka kuLinux
I-OpenSUSE 12.2 Milestone 2 iyatholakala
Abathandi be-lizard basenhlanhleni, njengoba itholakala I-OpenSUSE 12.2 Milestone 2 ngokusho indawo yezindaba kwe-distro eluhlaza.
Enye yezinto ezintsha zalokhu kukhishwa ukuthi ifaka phakathi I-Grub2 y Plymouth ukuze ama-flickers angabe esaboniswa ekuqaleni ne-yokugcina. Futhi kufakiwe I-GCC 4.7, umsebenzi uyaqhubeka wokuthuthukisa ukusekelwa kwe- ARM, bese ungeza I-RazorQT eduze kwezicelo ezijwayelekile.
Ungalanda I-OpenSUSE 12.2 Milestone 2 funa lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-OpenSUSE 12.2 Milestone 2 iyatholakala
Kuyahlekisa, i-distro eyangidubula ngaya ku-Arch yile; enguqulweni edlule
Ngenye indlela, ngijabule ngalokhu kusatshalaliswa futhi ngilinde ukuthi inguqulo entsha iphume.
Esikhathini esingengakanani esidlule ngizamile uDebian (ozinzile), uDebian (ukuhlolwa); isikhashana ngisebenzise iFedora (eyathatha isikhathi eside) kepha ayizange ingikholise impela; Phakathi koBuntu kwakuyisiphephelo sami. Ekugcineni ngihlale ngivuleSUSE, okunginika umuzwa wokuthi uzohlala kimi isikhathi eside (uma ngibekezelela i- "dystronitis")
I-openSUSE iba ngcono futhi ibe ngcono 🙂
Kuhlale kubonakala kimi kuyinto ebucayi kakhulu nengiya phambili ngesinyathelo esiqine kakhulu. Kepha angazi ukuthi kuyini…. kepha angiyithandi ... Mhlawumbe kungukuhlangenwe nakho okubi kokuqala kwami ​​ngeLinux. Ukube ibigingqika ibizolunga.
Bengingazi ngalokhu okuhlukile: O
Manje ngifuna ukukuzama 😀
Ngizolinda inguqulo yokugcina ukuyilanda, angiyithandi kakhulu ukubheja (I.
E-Tumbleweed ngeke ube nenguqulo entsha kuze kube yinguqulo yayo yokugcina, le repo ifaka kuphela isoftware ethathwa njengezinzile, ngeTumbleweed uzoba ne-opensuse 12.1 ukusho okuncane kepha okubuyekeziwe -> kde, kernels ……
Yebo, njengo-newbie omuhle oqhamuka ku- «Güin2» Ngilande izinhlobo ezimbalwa zokuzihlola, izinhlobo ezibukhoma azingikholisanga kakhulu futhi nginqume ukuzama ngayinye yazo ngokuzifaka ekwahlukaneni nasekuzisebenziseni, kulokhu ngiyadlala futhi nge-Suse KDE, besengivele ngiyifakile 2 Kwesinye isikhathi kepha bekubonakala kimi kuthikamezwa oqalayo kepha sengivele nginolwazi lwabanye abangaphansi kwalengqophamlando futhi ngizohlala nayo isikhashana uma ngingalahli ithemba ngaphambili bese ushintshela kuKubuntu engikuthanda kakhulu. Umbuzo enginawo kuphela ukuthi ngabe inguqulo yokugcina yale Beta iphuma, ingabe izovuseleleka noma kufanele ufake uziro?
Sawubona, njalo lapho kukhishwa ingqophamlando entsha usebenzisa i-zypper dup kusuka kukhonsoli futhi inguqulo ivuselelwa.
Hlala wazi ukuthi amabanga amnyama ayizinguqulo ze-beta ngakho-ke ukusetshenziswa kwawo kunconyelwa ukuhlola nokubika amaphutha kepha hhayi ukusetshenziswa okuvamile. Ngalokho, kungcono ukufaka inguqulo 12.1 bese uzobuyekeza lapho kuphuma u-12.2.
Ngiyajabula ukwazi ukuthi le nguqulo entsha isiyatholakala, ngibonile ukuthi abafana base-Opensuse abayekile ukwenza umsebenzi omuhle.
Ngiyakumema futhi ukuba uvakashele.
Isigcini Somculo Samahhala: lalela umculo wamahhala
Nakhu ukuthi ikhasi elisha lasekhaya leFirefox lizobukeka kanjani